Vatariri vemuAfrica vanorwisa kuuraya vanhu pasi pechirwere cheCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Vatariri vemuAfrica vanorwisa kuuraya vanhu pasi pechirwere cheCOVID-19
nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Iyo COVID-19 denda yakakonzera kukwidziridzwa kwekuvhima mu Africa yese sezvo vachengeti vemusango vakatambanudzwa kusvika pamugumo, zvichikonzera alarm uye kunetsekana kune vanoratidzira nevanochengetedza.
Ongororo yakaitwa nesangano rekuchengetedza vanokurudzira, Tusk neNatural State, yakaona kuti varindi vemuAfrica havaone chiratidzo chekusununguka.
Poaching iri kunyanyisa kuwedzera sezvo COVID-19 denda iri kuramba ichikanganisa nharaunda dzeAfrica nemhuka dzesango.
Ongororo iyi yakabvunzurudza makumi matanhatu emasangano eminda munyika gumi nenomwe mu Africa.
Sangano reConservation and Wildlife Fund kuHwange National Park, muZimbabwe, rinoti rakaona huwandu hwemisungo nemisungo hwaisvika zviuru zvisere kubva pakati paMay naChikunguru 8,000.
“Kwakave nekuwanda kunovhundutsa pachiyero chekusungwa zvine chekuita nenyanga dzenzou kwakaitwa nechikwata chedu mugore rapfuura. Vavhimi vasinga zorore zvisinei nedenda iri, saka zviri kwatiri kuchengetedza mashandiro pamwe nehunhu hwakakwirira nekudzivirira nekutarisira zvikwata zvedu, "akadaro Nyaradzo Hoto, sajeni pa International Anti-Poaching Foundation muZimbabwe.
"Tinomira takasimba mukuzvipira kwedu kwekutenderera munzvimbo dzakakura dzerenje dzatakapihwa nekuchengetedza avo vasingakwanise kuzviriritira pachavo kuvhima zvisiri pamutemo," Hoto akawedzera.
The International Journal of Protected Areas and Conservation yakawana kuti 78.5% yenyika dzakaongororwa muAfrica dzakataura kuti COVID-19 yakanganisa kugona kwavo kuongorora kutengeswa kusiri pamutemo kwemhuka dzesango, uye makumi mashanu neshanu muzana vakaratidza huwandu hwakakura kubva kuCOVID-53 pakukwanisa kudzikisira. kurwisana kwevanhu-mhuka dzesango.
Edwin Kinyanjui, mukuru wezvemhuka dzesango kuMount Kenya Trust kuKenya, akati varindi vanofanirwa kuve vakangwarira mugore rapfuura.
"Kuita zvisiri pamutemo nekuda kwekurasikirwa kwakawanda kwemari kuri kuwedzera uye vachiri kurwisa chiitiko ichi, varindi vari panjodzi yekubata COVID-19," akadaro Kinyanjui.
“Nzira dzekuvhima zvisiri pamutemo dziri kuwedzerawo kuva dzemhando yepamusoro, uye hurongwa hwekutongwa kwemhosva hwatambanudzwa. Tinoenderera mberi nekuti tinonzwisisa kuti zvatiri kurwira zvakakura kudarika isu, ”akadaro Kinyanjui.
Essential mari yekushanya kwemhuka dzesango anga avewo munyatwa nekuda kwedenda iri. Mutauriri kubva kuFrankfurt Zoological Society akati kukanganiswa kweCOVID-19 kuri kunzwika muNsumbu National Park muZambia.
"Uku kushomeka kwekushanya kwakakanganisa mabasa nehupenyu hwakabatana uye kwakapa chinetso mukubatanidza kukosha kwezvakasikwa nehunhu kuhupenyu hwevanhu," yakadaro nzanga.
Charity Rhino Ark, iyo inobatsira Aberdares National Park muKenya, yakati mari yevashanyi yeKenya Wildlife Services yakadzikira ne96%, izvo zvakakonzera kuderedzwa kwebhajeti kuzvirongwa zvehurumende zvemusango uye kuchengetedzwa kwemasango.
Nechinangwa chekugadzirisa dambudziko iri, anopfuura 150 mapoka evaranger ari kutora chikamu mu2021 Wildlife Ranger Dambudziko, akateedzana nematambudziko epfungwa nemuviri achiguma munaGunyana 18 mumakwikwi emakiromita makumi maviri nemaviri munzvimbo dzakapatsanuka uye dzakaoma nzvimbo dzakachengetedzwa muAfrica. .
Mari yakakwidzwa inobhadhara mari yekushandisa kweanosvika zviuru zvishanu varandi, zvichivagonesa kuriritira mhuri dzavo uye kuchengetedza nharaunda nemhuka dzesango mune dzimwe nzvimbo dzakanetseka kwazvo muAfrica.
"Ranger ndiwo musimboti wekuedza kwedu kuchengetedza uye anokosha kwazvo kuti tirasikirwe," akadaro Judi Wakhungu, mumiriri weKenya kuFrance, Portugal, Serbia, Monaco, uye Holy See.
Mishandirapamwe yekurwisa poaching muAfrica iri kuenderera mberi nekushomeka kwakanyanya kwemari inokonzerwa nekushomeka kwevashanyi panguva yedenda.
MuTanzania, imwe yenyika dzemuAfrica dzakapfuma nemhuka dzesango, zvakanzi vanhu vanosvika 33,386 vakavhima vakasungwa mumakore mashanu apfuura nekuda kwechirongwa chakasimba chekurwisa poaching chakatangwa neNational Anti-Poaching Task Force (NTAP).
Munguva imwecheteyo, zvombo 2,533 5,253 zvakatorwa; nyaya dzinokwana 914 1,600 dzakaiswa mudare iri; uye XNUMX dzakapedziswa zvichitungamira kujeri kwevanhu chiuru nemazana matanhatu.